Daawo:-Ciidamadii ugu badnaa ee Kaydka Puntland oo soo gaadhay Jiida Dagaalka ee Tukaraq-Video
Garoowe ( Horufadhi News)-Puntland ayaa Ciidamo cusub oo la sheegay inay ka yimaadeen Karkaar ( Qardho ) Waxay kusoo dhowaysay Jiida dagaalka ee deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool. HALKAN KA DAAWO VIDEO Masuuliyiin ka tirsan Puntland ayaa sheegay inay soo dhowaynayaan Ciidamadan oo ay sheegeen inay Qayb ka noqon doonaan Xoraynta Gobolka Sool, Sida ay […]
June 27th, 2018 | Posted in wararka | Read More »
Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda oo lagu dilay Muqdisho iyo qorigii uu watay oo laga qaatay-Akhriso
Muqdisho (Horufadhi News)-Askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa maanta barqadii lagu dilay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgoyska Siinaay, halkaasoo uu ka howl galayay. Rag ku hubeysan bastoolado ayaa toogasho ku dilay askariga, waxaana ay ka qaateen qori AK47 oo uu watay. Goobjoogayaal ku sugnaa Isgoyska Siinaay ayaa sheegaya in kooxdii dilka geystay ay baxsadeen, waxaana […]
Xiisad Dagaal oo Saaka laga soo sheegayo Deegaanka Tukaraq iyo Cabsi soo wajahday Shacabka-Akhriso
Garoowe ( Horufadhi News )-Wararka naga soo gaadhaya deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa Ciidamada Maamulada Puntland iyo Somaliland. Xiisadaan ayaa timid kadib markii Maalmihii lasoo dhaafay ay labada Maamul Halkaasi Ciidamo u geeyeen,, halka ay isku hor-fadhiyaan, sida ay dadka deegaanka […]
Akhriso:-Hoggaamiyihii Kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inuu u geeriyooday xanuun muddo hayay-Warbixin
Laascaanood (Horufadhi News)-Hoggaamiyihii Al-Shabaab Axmed Diiriye Abuu Cubeyda ayaa la sheegay inuu geeriyooday, sida ay baahisay Idaacad ku hadasha afka Ciidamada xoogga dalka. Abuu Cubeyda ayaa la sheegay in xanuun muddooyinkii u dambeeyay hayay u geeriyooday, waxaana warku sheegayaa in kilyaha ay fariisteen. Sarkaal ka tirsan Ciidanka xoogga dalka qeybta 43aad oo lagu magacaabo Ismaaciil […]
Daawo:-Beesha Hayaag oo Alle Bari Balaadhan ku dhigatay Degmadda Ceegaag ee Gobalka Cayn-Video
Buuhoodle (Horufadhi News)-Beesha Hayaag oo kamid ah Beellaha dega Gobalka Cayn ayaa Alle Bari weyn ku dhigtay Degmadda Ceegaag ee Gobalka Cayn waxaana ka qayb galay Boqolaal Qof. Alle Bariga Beesha Hayaag ku qabsatay deegaank Ceegaag ayaa waxaa uu soconaye Mudo gaadhaysa Sadex Casho waxaana kasoo qayb galay Wufuud aad u badan kuwaas oo isaga […]
June 26th, 2018 | Posted in wararka | Read More »
Daawo:-Gaas oo Hambalyo u diray Gobaladda Waqooyi-Video
Garoowe ( Horufadhi News)-Madaxweynahaa Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ku beegan maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed la taago dhul Soomaaliyeed hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Shacabka gobolada Waqooyiga Soomaaliya, maalintaas oo ay ka soo wareegtay sanad guuradeeda 58 sano kuna weyn umadda Soomaaliyeed dhammaantood. HALKAN KA DAAWO VIDEO […]
Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo Ubax dhigay Taalada Daljira Dahsoon-Video
Muqdisho (Horufadhi News)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka ubax dhigay Taallada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho, waxa uu halkaasi kula hadlay boqollaal shacab ah oo u dabbaal dagayay maalamaha xorriyada. Madaxweynaha ayaa dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 26 ka Juun, isaga oo sheegay in ay tahay maalin weyn oo farxad leh oo dalkeena qeyb […]
Qormo:-Hambalyo Sanad Guuradii 58-deedaad, ee 26-ka June-Akhriso
Boorama (Horufadhi News)-Bishani waa bil u gaar ah Afrika. Waa bil ay heeryadii gumaysiga iska qaadeen. Sidoo kale innana waa maalin innoo gaar ah.Gaar ahaan, haddii aan nahay Reer Waqooyi, waxa ay noo tahay maalin dahab ah. Gumeystihii Ingiriisku, waxa uu waddanka soo geliyey fikrado iyo tabo cusub, oo ay Soomaali ku kala qaybinayeey. Ingiriisku […]
Akhriso:-Aasaaskii Xisbiga U.S.P “United Somali Party”-Qormo
Laascaanood (Horufadhi News)-Sanadkii 1959kii ayaa la soo gadhay iyadoo 11 sano ka hor uu si baaxad leh oo aad u faafsan Soomaliweyn oo idil magaalooyinkeeda uu ka hirgalay xisbiga SYL. Xaruntiisu waxay ahayd Xamar laakiinse ilaa Soomaalida galbeed, NFD, bariga iyo bartamaha ilaa waqooyiga Soomaaliyaba waxaa si weyn dadku u taageereen SYL. Dadka Sool , […]
Muuse Biixi oo sheegay in uusan aqoon sababta Cabdiwali Gaas Midiyaha ugu soofaysanayo-Akhriso
Hargeysa (Horufadhi News) – Hoggaamiyaha maamulka Soomaliland Muuse Biix Cabdi ayaa mar kale ka hadlay dagaalka dhiiga ku daadanayo ee u dhaxeeya Ciidamada Soomaliland iyo Puntland. Muuse Biix Cabdi, ayaa sheegay in ciidamada Cabdiweli Gaas ay diyaar u yihiin inay khilaafka jira uga dhex faa’iideystan daadinta dhiiga shacabka ku nool Gobolka Sool. Muuse Biix Cabdi, waxa […]